प्रदीप र अनमोल यी नायिकालाई किन फापेन ? – Everest Dainik
प्रदीप र अनमोल यी नायिकालाई किन फापेन ?
अहिले कुनै नवनायिकालाई तपाई कोसँग पर्दामा रोमान्स गर्न चाहनुहुन्छ भनेर सोध्ने हो भने, धेरेको जवाफ हुन्छ अनमोल केसी वा प्रदिप खड्का । यी दुई नायकको जोडी बनेर खेल्न पाए भाग्य चम्किन्छ भन्ने सोच धेरैमा देखिन्छ ।
तर, प्रदिप र अनमोलसँग काम गर्ने वित्तिकै बजारमा चल्ने ग्यारेन्टी भने हूँदैन । भाग्य चम्किनका लागि आफ्नै मिहिनेत चाहिन्छ भन्ने केही नायिकाको उदाहरणले पनि पुष्टी हुन्छ ।
नायक प्रदिप खड्कासँग चलचित्र ‘प्रेमगीत २’मा काम गरेकी नायिका अश्लेषा ठकुरीलाई अरु निर्माताले पत्याएका छैनन् । चलचित्र ‘प्रेमगीत २’मा कमजोर अभिनय गरेकी यी नायिकाले अहिले बल्लतल्ल चलचित्र ‘मेरी मामु’ मा काम पाएकी छन् । तर, यो चलचित्रलाई ‘प्रेमगीत २’ का निर्माता सन्तोष सेनले नै बनाएका हुन् ।
अश्लेषाको अभिनय र संवाद बोल्ने शैलीको आलोचना भएको थियो । जसले गर्दा, ‘प्रेमगीत २’ र प्रदिप खड्का चलेपनि अश्लेषाको हातमा चलचित्र नै आएन ।
चलचित्र ‘होस्टेल’मा नायिका रिस्ता बस्नेतले नायक अनमोल केसीसँग काम गरेकी थिइन् । तर, चलचित्र हिट भएपनि उनीमाथि निर्माताले खासै रुची लिएनन् । केही चलचित्रमा काम गरेकी रिस्ता अहिले रित्तो हात बसिरहेकी छिन् ।
यता, अनमोलसँग नै डेब्यू गरेकी नायिका आना शर्मालाई पनि खासै फाइदा भएको देखिदैन । अनमोलसँग चलचित्र ‘जेरी’मा काम गरेकी आनाको हातमा अहिले चलचित्रको चाप छैन । आनालाई दर्शकले नपत्याएपछि चलचित्र निर्माताले पनि पत्याएनन् ।
यता, अनमोलसँग नै डेब्यू गरेकी अर्की नायिका अदिती वुढाथोकी अहिले मुम्बइमा छिन् । ‘कृ’मा अनमोलको हिरोइन भनेर चर्चा पाएकी अदितीलाई चलचित्रको अफर जुन तरिकाले आउँछ भन्ने धेरैले सोचेका थिए, त्यस्तो हुन सकेन । मुम्बईमा संघर्षरत अदितीलाई नेपाली चलचित्रको यात्रा सहज हुने देखिएको छैन ।
अब, उनै अनमोलसँग प्रियंका एमभी, उपासना सिंह ठकुरी र सुहाना थापाले डेब्यू गर्दैछन् । उनीहरु कति सफल होलान्, यो भने प्रतिक्षाको बिषय हो । तर, अनमोल र प्रदिपसँग काम गर्दा नायिकाहरुले अस्थायी चर्चा पाए पनि स्थायी रुपमा हिट हुन साम्राज्ञीको जस्तो मिहिनेत र क्रेज आवश्यक देखिन्छ । एजेन्सीको सहयोगबाट
मणिपुरमा प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका २१ महिलासहित १७९ जना फर्काउन सकस, याैन हिंसामा परेकाे खुलासा
काठमाडौंबाट हराएकी सावित्राको शव मोरङको जङ्गलमा
अष्ट्रेलियासँग सिरिज खेल्न भारतीय टोली घोषणा, को–कोले पाए मौका ?
पाकिस्तान सुपर लिगः स्टार खेलाडी रहेको अफ्रिदीको टोली पराजित
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका रोजागर मेला समापन
सगरमाथा आरोहणमा चीनले लगायो प्रतिबन्ध
दाङमा बस दुर्घटना, ४५ जना घाइते, ८ को अवस्था गम्भीर
प्रचण्डले माओवादी जन्मिने चेतावनी दिएपछि राती पौने १२ बजे ईश्वर पोखरेलले लेखे यस्तो स्टाटस
झन शक्तिशाली बन्दै प्रचण्ड, भन्छन्– बाँकी जीवन समृद्ध नेपालका लागि